Dowlada Mareykanka Oo Ka Walaacsan Ka Bixitaanka Ciidamada AMISOM Ee Soomaaliya * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowlada Mareykanka Oo Ka Walaacsan Ka Bixitaanka Ciidamada AMISOM Ee Soomaaliya
Waaxda Arrimaha Dibedda Maraykanka ayaa sheegtay inaysan xilligan munaasab ku ahayn inay AMISOM ka baxaan Soomaalia, waxayna ka digeen inay Kooxaha Xag-jirka wax u dhimi doonaan Mandiqadda Gobalka, waa sida hadalka loo dhigay.
Sarkaal ka tirsan Waaxda Arrimaha Dibedda Maraykanka oo lagu magacaabo Wohleris Mariyoon ayaa u sheegay Wargeyska The East African ee ka soo baxa magaalladda Nairobi inaysan Dowladda Maraykanka rajeyn doonin inay wax Ciiddan AMISOM ka baxaan Soomaalia bisha soo socota ee December.
Waxa uu carrabka ku dhuftay inay Dowladda Maraykanka diyaar u tahay inay Ciiddanka AMISOM siiyaan Taageero dhinacyadda Tababarka, Dhaqaalaha, Loojistikada iyo Taageeradda La-talinta, si loo dhiso Awoodda Ciiddanka Soomaalia ee ka garab shaqeeya kuwa AMISOM.
Waxa uu intaasi ku daray inay Maraykanka taageerayaan Shuruudaha asaaska u ah Dhimista Ciiddanka AMISOM, taasi oo uu xusay inay ku xiran tahay Horumarinta Awoodda Khibradeed ee Ciiddanka Ammaanka Soomaalia.
Taliska AMISOM waxay iyagana dhawaan sheegeen in bisha soo socota 1,000 Askari oo AMISOM ah laga daad-gureyn doono Soomaalia, iyadoo 1,000 kalena la daad-gureyn doono bisha May ee sannadka soo socda ee 2108-ka.
Sidoo kale, Qeybta ugu dambeysa ee 21,000 Askari ee Ciiddanka AMISOM ka jooga Soomaalia waxaa laga daad-gureyn doonaa sannadka 2020-ka.